Beehind wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso iPhone 4S / iPad 2 illaa iOS 6.1.3 | Wararka IPhone
Pablo Aparicio | | iPhone 4S, Casharrada iyo buugaagta
Isticmaalayaal badan, gaar ahaan milkiilayaasha iPad 2 ama iPhone 4, waxay si xiiso leh u xasuustaan ​​waqtiyadaas markii qalabkoodu si heer sare ah ula shaqeynayay. Heerkaas ayaa u lumay iyaga imaatinka macruufka 7 waxqabadkuna wuu sii yaraaday imaatinka macruufka 8. Milkiileyaal badan oo iPhone 4S ah ayaa jeclaan lahaa inay awoodaan inay ku noqdaan macruufka 6.1.x iyo, runtiina, horeba way u suurtagashay leh qalabka odysseusOTA, laakiin aaladdaas ayaa loo heli karay oo kaliya Mac. Hada, mahadsanid user hudiny, oo ka faalooday maqaalka ku saabsan odysseusOTA, waxaan ogaanay inay jirto Beehind, aalad hoos loogu dhigayo macruufka 6.1.3 aaladaha leh processor-ka 32-bit ah ee isticmaala winocm kloader-ka kana shaqeeya kombiyuutarada Windows-ka.
Marka hore, waxaad dhahdaa annagu iskamaanaan tijaabin, laakiin nacasnimadu waxay xaqiijineysaa inay guuleysatay iyo barta twitter-ka waxaa jira dad badan oo xaqiijinaya inay sidoo kale ku guuleysteen inay hoos u dhigaan qalabkooda. Caqli ahaan, Actualidad iPhone mas'uul kama aha dhibaatooyinka laga yaabo inaad la kulanto inta hawshu socoto.
Horumariyaha ayaa leh Beehind waa qalab loogu talagalay Windows Vista ama ka sareeya oo kuu ogolaanaya inaad hoos u dhigto qalabka 32-bit. Waa kan mudaaharaadkiisii ​​fiidiyowga ahaa.
FIIRO GAAR AH [8/8/2015]: In kasta oo soo-saaraha uu hubiyo inuu la jaan qaadayo dhammaan aaladaha 32-bit, wuxuu ku xaqiijiyay twitter-ka @abdisalaan (Waad ku mahadsan tahay digniinta) taas, xilligan la joogo, waxay kaliya la shaqeysaa iPhone 4S iyo iPad 2. Milkiilayaasha aaladaha kale, waa inaad dulqaad muujisaa.
@pabmore way suurto gal noqon doontaa 🙂 iska samir
- Behind (@beehindowngrade) August 8, 2015
1 Qalabka gadaal u dhigma
2 Sida loo hoos u dhigo macruufka 6.1.3 ee leh Behind
Qalabka gadaal u dhigma
Sida loo hoos u dhigo macruufka 6.1.3 ee leh Behind
Si aad u isticmaasho Behind Waa inaad haysataa iPhone / iPad oo leh JAILBREAK, sidaa darteed tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa in xabsiga laga sii daayo (haddii aadan horey u lahayn).
Waxaan kala soo baxnaa IPSW-ka macruufka 6.1.3 oo u dhiganta qaabkaaga iPhone / iPad ee www.getios.com tusaale ahaan.
Waxaan rakibnaa OpenSSH waxaa qoray Cydia
Waan furannaa Gadaal.
Waxaan gujineynaa badhanka "Dooro".
Waxaan dooranay ipsw in aan soo dejisanay tillaabada 2.
Waan sugeynaa si loo aqoonsado.
Marka la aqoonsado, waan sameynaa dhagsii "Haa"
Waxaan qornaa ECID ee qalabka. Haddii aynaan ogeyn, waxaan ku xireynaa iPhone / iPad kombiyuutarka oo gujineynaa weedha buluugga ah ee ka hooseysa sanduuqa wadahadalka si aan toos ugu ogaanno.
Waan sameynaa dhagsii "Dhis IPSW!".
Farriimo kooban ayaa soo muuqan doona dhammaantoodna waxaan ku dhajin doonnaa "ok".
Waxaan hubinaa in qalabku ku xiran yahay iyo waxaan gujineynaa "Gali Sawirka DFU" taxaddar inaad sameyso hal mar oo keliya.
Waxaan sugeynaa 30-40 ilbiriqsi. Haddii aysan shaqeyn, waxaan xirnaa Beehind oo dib ayaan u fureynaa, tag "xulashada qaabka" menu oo dooro "kloader mode".
Waan sameynaa dhagsii saddexda dhibic (…) oo xulo feylka iBSS.img3 in aan ka heli doonno feylka ay Beehind ku sameysay desktop-ka.
Waxaan soo qaadaneynaa cinwaanka IP-ga ee qalabka 'WiFi' (aadaya Settings / WiFi / (i) ee shabakadeena / IP Address) waxaanan ku qoreynaa sanduuqa kaliya ee wada hadalka cad ee aan ku aragno Beehind.
Mar labaad ayaan sameynaa dhagsii "Gali Doodu DFU Mode".
Haddii aan aragno farriinta "10 ilbidhiqsi kadib. ma jiraan qalab DFU ah […] ”, waxaan ka jari karnaa qalabka oo dib ayaan u xirnaa. Kadib waxaan gujineynaa "OK". Farriinta xigta, markale "Haga".
Daaqada xigta, waxaan gujineynaa 3da qodob (…) iyo waxaan dooranay IPSW-ka oo ay Been-ka abuurtay ka hor
Waan sameynaa dhagsii "Soo Celinta!" waana sugeynaa.
Waxaan rajeynayaa in, haddii aad go'aansatay inaad tijaabiso Beehind, way kuu shaqeysay adiga waxaadna ku raaxeysan doontaa qalabkaaga dhammaan quruxdiisa.
Download Beehind (dhagsii Download).
Beddelka Behind Download.
Behind Twitter wixii taageero iyo cusbooneysiin ah.
Haddii aad la kulantid guuldarrooyin, waxaad isku dayi kartaa inaad soo dejiso qalabka soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 4S » Behind: qalab cusub oo hoos loogu dhigayo iOS 6.1.3 qalabka 32-bit
4-ta maya? : '(
Nabade Gonzalo. Marka loo eego feylka la socda barnaamijka, waa la jaan qaadi karaa. Waxaan ku daray macluumaadka cusub.
Sharax sida aad u sameysay CARLOS J?
Su'aal, midkani ma u shaqeeyaa iPad mini 1 midkoodna?
Waad salaaman tahay, Sda2012. War wanaagsan. Faylka waxay xaqiijineysaa inuu la jaan qaadayo qalabka 32-bit waxaana ka mid ah iPad mini 1. Waxaan ku darayaa macluumaadka maqaalka.
Waad ku mahadsan tahay, waxaan isku dayayaa
Waxaan u maleynayaa in ipod taabashada 5g ay caadi tahay?
Jawaab Ivan Galan Guimera
Wanaagsan waxa aan dhihi karo waa odysseusOTA HALKAN IMTIXAANKU WUXUU KU FILAN YAHAY IMTIXAANKA .. waa ka sii badan yahay, tan oo ah nooca facebook 5.5 ayaa aniga ila shaqeysa 100%: 3
Ku jawaab Karlos Phary
Ma lagu sameyn karaa 4?
Maya, kaliya 4s
Haye saaxiib, waan tirtiraa koontada 'iCloud' ???, tan iyo markii aan iibsaday gacanteyda labaad oo ay i khiyaaneeyeen
Jawaab Menuel Skywalkerr
Ma aqaano ..., waligey kuma lahan akoon icloud.
FaceTime ma kuu shaqeeyaa?
Waa hagaag waxaan raadiyay qalabkaas oo waxay umuuqataa inay ka bexeen internetka, hahahaha, dhamaan xiriiriyeyaasha aan kahelo waxay leeyihiin qalad isku mid ah: (((()
Jawaab Oscar Ml
dib ugu noqon kartaa macruufka 7.1.1 / macruufka 7.1.2 ama kaliya macruufka 6.1.3?
fiiri wax dheeraad ah getios.com
Ku jawaab alejandro parra
Suurtagal ma tahay in hoos loo dhigo 4Gb iPhone 8s? Tan iyo markii ay la timid macruufka macruufka 7
Jawaab Flavio Yohonson
4-ta sano uma baahnid shsh si aad isugu daydo in aanad waxba lumin, u raaco fiidyowga talaabo talaabo waadna fiicnaan doontaa.
Ku jawaab Hudiny
Haa waa suurtagal, waxay ku shaqeysaa si fiican 4gb iphone 8s, oo waxay iga tagtay wax ka yar ama ka yar 2 gb dheeraad ah ... Farqiga weyn 🙂
My 4S oo leh 7.1.2 ayaa raaxo leh
Jawaab Lane McBean
Laakiin iCloud maxaa?
Jawaab Hipolito Alberto
SHSH la'aanteed kama shaqeyneyso qalab kasta oo kale, kaliya iPhone 4S iyo iPad 2 ...
Adigoon rakibin ssh furan, hoos uma dhigi kartid?
Waad salaaman tihiin. Waxaan sidoo kale su'aal ka qabaa iCloud. Waxaan u maleynayaa inaan fahamsanahay in JAILBREAK laga sameeyay qalabka? Sidaas darteed haddii aad haysato qalab 32-bit ah oo la illoobo iCloud, waxaad dib ugu laaban kartaa macruufka 6.xx oo ay ku jirto JAILBREAK…? Oo haddii aaladda aan la hawlgelin, hadda dib loo soo celiyo, ma lagu celin karaa macruufka 6.xx?
Haddii qof uu haysto mid ka mid ah jawaabahan la caddeeyey, miyaad ka faalloon kartaa?
Ku soo jawaab Sapic
Aaladda JAILBREAK TAHAY ayaa loo baahan yahay si ay u fuliso howsha hoos u dhigista Haddii aadan geli karin maxaa yeelay moobilkaaga wuxuu ku xiran yahay iCloud, waxaan ka shakisanahay inaad howsha qaban karto… ..haddii aad awoodid, marka aad bilaabeysid iOS6 waxay sidoo kale ku weydiin laheyd lambarka sirta ah ee koontada iCloud. Ma awoodi doontid inaad ka gudubto nidaamka amniga, haddii taasi ay tahay su'aashaada, way sii socon doontaa inay soo baxdo.
Ha ha .. !! Waad ku mahadsantahay jawaabtaada Carlos J. Waxaan u maleynayay in labada wado midkoodna aysan suurta gal aheyn. Waxaan horey u maqlay in aalad leh iCloud ay marwalba u sheegi doonto Apple inuu shaqeynayo, had iyo jeerna dib u soo celinta ama dib u howlgelinta aaladda sidaa darteed fariinta iCloud marwalba way iska boodi doontaa iyadoon awood u yeelan karin inay shaqeyso illaa aad aqoonsigaaga dhigto mooyee.
Maxaa la yiri. Mahadsanid Carlos J. Waxaan usheegi doonaa saaxiibkey dhibaatadan leh xitaa inuusan xalin karin.
Saaxiib wanaaagsan salaan. By habka. Qoraal aad u wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay Actualidadiphone.
Haddii aan hoos uga soo dhaco macruufka 8 ilaa macruufka 6. Kadibna codsiyada ma is waafaqsanayaan mise qaladaad bay siinayaan? Ama waxaa jira xoogaa tweek ah oo lagu khiyaaneeyo nidaamka aaminsanaanta in aan leenahay nooc ka casrisan oo lagu rakibay ..
Waxay kuxirantahay hadduu barnaamijku adeegsado maktabadaha noocyada cusub ee macruufka inuu shaqeeyo, ama waxay si fudud u weydiistaan ​​noocyo cusub maxaa yeelay waxay dareemayaan inay la mid yihiin. Waa in mid mid loo aado tijaabinta si loo arko haddii ay shaqeynayaan iyo in kale. Laakiin haddii aad u baahan tahay faylal ka yimid noocyada cusub ee macruufka, ma jirto hab lagu khiyaaneeyo nidaamka inuu shaqeeyo.
Markaad rakibineyso macruufka dfu, gabi ahaanba waad soo celin laheyd waana la qaabeyn lahaa. Waxaad lahaan lahayd ipad wershad ah. Waa inaad mar labaad soo dejiso barnaamijyada. Ka taxaddar, waxaa jira qaar u baahan ios7, laakiin waxaa jira kuwa kale oo adiga ku siinaya ikhtiyaar aad ku soo dejiso nooc hore oo ah ios5 / 6.
Waxba kamajiraan been abuurka… .. usheeg iPhone-kayga 5aad ee hore, kaliya waxaan kasoo dagsaday iOS8 ilaa iOS6 wuxuuna u shaqeeyaa si qumman.
Aan aragno haddii aan waxbadan baranno kahor intaanan sii deyn dhalashada.
Waxaad horeyba isugu dayday iphone 5, sax? Su’aashayda, baytarigu wuu sii dheeraanayaa, sax? maxaa yeelay hadaanay ahayn waxaan si xun u xasuustaa macruufka 6 waxay ku qaadatay 1 maalin si fudud ... Salaan!
Waan hoos u dhigay isaga oo isku dayaya habka, laakiin ma isticmaalayo moobaylka maadaama aan haysto 6 +. Haddii batterigaagu waqti dheer ku sii jiray iOS6, waa inuu sii dheeraadaa haddii aad hoos u dhigto.
Dabcan, waxaan u maleynayaa in qaabkani u badan yahay 4S, iPad 2 ama Mini 1, kuwa loogu talo galay kuwa lumiyay waxqabadkooda waqti ka badan kantarkooda oo ay ka doorbidaan xawaaraha barnaamijyada, maxaa yeelay maskaxda ku hay in haddii aad hoos u dhigto, barnaamijyo badan maanta weydiiso iOS7.
Sharax sida aad u sameysay nidaamka loogu talagalay iPhone 5. Fadlan.
Si la mid ah Saddan, sharax sidaad u samaysay fadlan, maxaa yeelay adeeggan (Beehind v0.2) iima oggola inaan dhigo IPSW-ka iPhone 5. Kaliya 4S iyo iPad 2. Salaan
Adiga awood u yeeshay inaad hoos ugu dhigto iPhone 5,
Sidee ayaad u sameysay ama qalabkee si sax ah u ahaa?
Ma waxay ahayd inaad SHSH ka isticmaasho macruufka 6 (oo la kaydiyey sanadkii 2013)
Mise waxaad sameysay SHSH la'aantii, adoo adeegsanaya kaliya Beehind?
qalabkaagu waa nooca A1428 ama ka duwan?
Fadlan ka jawaab,
inta aan arkay waxaa la samayn karaa oo keliya marka la badbaadiyo SHSH.
Jawaab Fernando Fuentes
kaliya ma u sameyn kartaa macruufka 6.1.3? Waxaan ka socday 6.1 ilaa 7
kuma shaqeeyo ipad mini 🙁
Ciise C. dijo
Waxaan kaliya isku dayay inaan ku sameeyo iPhone5 laakiin waxay u gudubtaa oo keliya meesha qalabka lagu doorto! : S
Jawaab ciise C.
Ciise Guzman dijo
Iphone 5 GLOBAL ma shaqeynayo markii aad dooranaysid qalabka firmware-ka waxaa jira calaamad ay ku qoran tahay BETA LIMITED.
Jawaab Ciise Guzman
Nope, waxaad ku rakibtaa macruufka 6.1.3 xoqida. Taasi waa in la yiraahdo waxaad ku xiran tahay noocyada barnaamijyada iyo barnaamijyada lahaan lahaa macruufka 6.1.3. Oo iska jir, tusaale ahaan isboorti, waxay joojiyeen taageerida ios6.
Been, Spotify hadday ku shaqayso iOS6, waxaan ku rakibay iPod 4G-ga
Jawaab Joel B
Waxaan doonayay in wax un u soo baxo hoos u dhigida, laakiin 4-tahaygu waa kuwa raaxada leh macruufka 8.4 iyo JAILBREAK… Way ka xasilloon tahay noocyadii hore ee macruufka 8. Ma arko baahida loo qabo in hoos loo dhigo.
Qof ayaa ku guuleystey inuu ku isticmaalo FaceTime-ka iPad-ka iOS 6.1.3
Waxa ugu xun ayaa ah inaannaan sameyn karin wicitaanada Face Face, qof ma si uun buu u helay? Waa wax laga xishoodo maxaa yeelay iPad-ku waa raaxo macruufkan
Waxaan ku sameeyay kaliya 4s, waa isku dayga moodooyinka kale laakiin si fiican ayey u shaqeysaa
Ma gali karo bogga si aan u soo dajiyo Beehind 🙁
Waxaan u socdaa si dhakhso leh oo dhakhso leh si aan ugu soo raro websaydh soo dejisan!
Pablo, sidee ku saabsan weydiin, waxaan hayaa kumbuyuutarkeyga oo leh daaqado 7-bit ah 32 iyo markaan rakibo qalabka behind-ka, astaamaha oo dhan ayaa soo muuqda, laakiin markaan rabo inaan furo si aan howsha u bilaabo waxaan helay qalad, taasi waa, aniga ma furi karo barnaamijka. Maxaad u maleyneysaa in faahfaahintaasi sabab u tahay jawaabtaada waan sugayaa, aad baad u mahadsan tahay.
Ku soo jawaab Walther
Nabad, Walther. Kuguma siin karo jawaab sugan maxaa yeelay ma awoodin inaan tijaabiyo kumana isticmaalo Windows sidoo kale. Ma u maamushay maamule ahaan? Soosaaraha ayaa xaqiijiyay inay hadda kaliya la jaan qaadi karto iPad 2 iyo iPhone 4S. Waxay ka shaqeyneysaa sidii ay ula jaan qaadi laheyd inta ka hartay aaladaha 32-bit ee ka socda iPhone 4 ilaa 5c, laga bilaabo iPad 2 ilaa 4 iyo iPad mini. Sidoo kale maskaxda ku hay inay ku jirto beta.
Waxaan ku darayaa in lagugula talinayo inaad tan isticmaasho: https://drive.google.com/file/d/0B3OvePI0m-B5UlF1VVhZaTNpVVE/view?usp=sharing
Montiel Chavez Bernard dijo
Hoos-u-dhicis la'aan ayaa ka saareysa icloud, waxaa jira kaliya nacasyo jecel waxyaabaha dadka kale iyo kuwa anshaxdarrada ah ee iibsada wax la xaday, si fiican u badbaadi lacagtaas si ay u cunaan laba maalmood oo kale, iyo tan iyo markii ay aadeen dukaanka tufaaxa, waxaan ka shakisanahay inay halkaas ku iibin doonaan aaladaha ICLOUD , qof ayaa ii soo diri doona xiriirka si aan u soo dejiyo beehind buuxa, waxaan hayaa beta, 5213 3184 10231 whatsapp
Jawaab ku sii Montiel Chàvez Bernard
loogu talagalay ipod 4g ?????
Waxaan haystay beta-kii 2aad ee dadweynaha ee iOS 9 oo aan rakibey horeyna waan uga dheregsanahay gaabiska qalabkeyga.
Aniga oo wata iPad 2 WIFI 16Gb, waxaan hoos ugu dhigay 8.4, ka dibna Jailbreak oo leh Taig 2.410 dhamaadka waxaan raacay talaabooyinka boggan cajiibka ah.
Waxay dareemeysaa xoogaa qariib ah fiirinta macruufka hore, laakiin dhab ahaantii si dhakhso leh ayey u shaqeysaa. Aad baad u mahadsantahay!
Ma u cusbooneysiin karaa macruufka 8 ka dib hoos u dhigista?
IPhone 4 hoos ma loo dhigi karaa? Oo qof ma sameeyey? Mahadsanid
Anigu waxaan ahay 1 gen ipad mini user, ma waxaa jiri doonta wado lagu yareeyo ios 7? ama laga bilaabo macruufka 6 ma awoodi doonaa inaan u soo raro macruufka 7?
Ku jawaab Xavi botero
qof ayaa horey u tijaabiyay hadii lagu sameyn karo iphone 5c
Hello Mario. Maheysid calaamado ay ku qorantahay iPhone 4-ka hadii ay shaqeyso? Haddii aad hayso maqaal kale ama aaladda Apple, isku day inaad aragto .. 4s tusaale ahaan ... 🙂
Waan kaftamayaa. Waxaan rajeynayaa inaanan cidna khalkhal gelin. Waa wax qosol badan .. Mararka qaar waxay dhacdaa inay sudhan tahay oo aanan badbaadin mid ka mid ah hadduu hore u faallooday oo aan dib ugu soo shubo faallada 20 anigoon ogeyn midkood .. Waxay igu dhacday mararka qaarkood 🙂
Waa salaaman tahay, Marcelo. Waxaan aad u xiiseynayaa Saver haddii iPhone 4s-kaaga uu u shaqeeyo sida aad u sheegto, oo ka fiican maya macruufka 8? Ma leedahay Jailbreak la sameeyay, imisa ayaad wax ka bedeshaa oo aad haysataa oo maxay yihiin? Mid ayaan ku hayaa macruufka 8 .2.1 mana aaminsani wax ku saabsan inaan u soo raro macruufka 8.4 sababta oo ah waxa midigta laga sheegay oo cunaysa baytariga ..
Fadlan, haddaad ii jawaabto oo aad sharraxaad ka bixisid shakigeyga, aad baan u qaddarin lahaa. Xaqiiqdii ma haysto wax qalab ah oo leh iOS 8.4 sababtoo ah vateria darteed.
Waan jeclaan lahaa faallooyinkaaga ku saabsan waayo-aragnimada macruufka 8.4 ee iPhone 5s, iPhone 5, iPad 2 3G + wifi iyo 4s. Waan dhunkaday, Saver ayaa soo xigtay tan iyo markii macruufka 8.4.1 lasii deyn doono oo JAILBREAK durbaba eber yahay! Jawaabo fadlan !!
hello sapic hada waan arkay aragtidaada, sifiicanna waan kuu sheegi doonaa sida ay wax udhaceen, tan iyo markii aan cusbooneysiiyay iOS 8 ... laga bilaabo waqtigaas wax waliba si xun ayey kubilaabeen, xitaa sidaas oo ay tahay waan sii cusbooneysiiyaa iPhone markasta oo ay soo saaraan nooc cusub. , ilaa markii aan gaadhay 8.3 halkaas waxaan ku fikiray in xaqiiqda aysan isku mid noqon doonin! ... laakiin macruufka 8.4 ayaa soo baxay wax walbana waa la hagaajiyay, hada arinta batteriga, taasi waa arin waligeed jirtay, markaan ku isticmaalo xogta 3G, waxay socotaa ilaa 4 saacadood, laakiin maahan, laakiin sidaan idhi , had iyo jeer waxay ahayd dhibaatada batteriga, kama qoomameynayo inaan ku haysto 8.4, waxaan lahaa madax xanuun badan oo leh noocyadii hore ee kan hadda xaliyay ... iyo marka loo eego JB waxaa jira waxyaabo aad u yar oo isbeddel ah Waxaan isticmaalaa: dhaqaajiyaha, silsiladaha, daaqadaha, xawaaraha xoojinta, saboolka jiilaalka iyo zeppelin ... ka hor intaanan isticmaalin qorrax madoobaadka ... laakiin hadda waa la bixiyay. Waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo waxa qoran ... salaan
waayo kerian hoos u dhig iphone 4 https://www.youtube.com/watch?v=UpmYC-dUwVk , Waxaan kaliya isku dayay oo waxaan la ahay iphone 4 5.1.1, maxaa 5,1,1? si fiican waxaan isku dayayaa inaan uhelo aqristaha kaarka xusuusta inuu shaqeeyo laakin waan isku dayay oo waxba ma ahan, dhanka kale ipad 2 oo leh hoos u dhigis hooseeya wali ma sameyn karo jb oo leh powsixwn barnaamijka wuu burburayaa, sidoo kale hadaad su'aalo qabto ama caawinta dhibaatadayda waa la soo dhaweynayaa
Jawaab Patricio Eduardo Reyes Bermudez
Ma jiraa qof ku helay 1st Gen iPad Mini? Waxaan helay digniin oranaysa "BETA LIMITED", ma taqaanaa sidaan tan ku xallin lahaa?
hawshan waxaad u baahan tahay inaad haysatid iTunes, iyo haddii ay noqon lahayd nooc gaar ah?
Ma xasuusto isaga oo sheegaya nooc ka mid ah iTunes. Markaad fiiriso taariikhaha, nooca ugu dambeeya ee iTunes-ka wuxuu qiyaastii yahay July 12-keedii maqaalkanna wuxuu ka yimid 31-da.Haddii ay dhibaato ku tahay iTunes-ka, waa inuu noqdaa cayayaan ay tahay inuu horumariyaha saxo.
Ma jiraan wax laga ogyahay hoos u dhaca ipad 3?
iyo haddii la samayn karo iyada oo aan shsh la helin?
Waad salaaman tahay, Julio. Wax faallo ah kamay bixin iPad 3 wixii markaa ka dambeeyay. Waxay ahayd inay shaqeyso, laakiin ma ahayn bishii Ogosto welina ma aysan hagaajin.
Diyaar ma ahan, dhib malahan iPhone 4S
markaad wax u dhimeysid JAILBREAK… waa luntay kadib markii aad sameysay ???
Lagu sameeyay iphone 4s. Waxaan ka soo dejiyay macruufka 8.1.3 ilaa macruufka 6.1.3 si dhammeystiran dhibaato la'aan !! Way shaqeysaa 100% MAHADSANID !!
Waa salaaman tahay, galab wanaagsan, waxaan doonayay inaan ogaado haddii aad psr x aad iigu soo diri kartid xiriiriyaha soo dejinta ee Beehind, maadaama midkoodna aan la heli karin, aad baad ugu mahadsan tahay horay
Wanaagsan, waxaan haystaa iPhone 4 GSM oo sifiican ayey udhacday qaabki laakiray laakiin markaan dhammeeyo waxay ii reebeysaa iPhone-ka wax aan kuxiriiriyo iTunes oo ah nooca 0.4, xoogaa adeeca ama mid ku sameeyay iPhone 4?
ku fiican ipad 3 (ipad cusub) waqtigiisa ma jecli iphone 4s ipad 2na waa raaxo ... xq n kar? Ipad 2 ma ku ridi karaa ipad 3? Mahadsanid!!!
Qoraallada qoraalada ee ku saabsan macruufka 6 waxay joojisay isku mid ahaanshaha qoraalada iCloud. Qofna ma garanayaa wax xal ah?
suurta gal ma tahay in jb lagu sameeyo nooca 6.1.3? qalab p0sixpwn ma shaqeeyo 🙁
Waxaan hoos u dhigay iPhone 4s ilaa iOS 6.1.3 runtiina waa hadii ay soo ceshato waxqabad arxan darro ah, marka la eego nidaamka barnaamijyada u gaarka ah (kamarada, fariimaha, dejinta, sawirada, iwm).
Marka laga hadlayo taageerada codsiyada-saddexaad (facebook, twitter, instagram, dropbox, flipboard, youtube, iwm) waa "ganaax" iyo sidaas xigashooyinka, maxaa yeelay marka hore wax walba si fiican ayey u socdaan, laakiin markaa codsiyada qaar ayaa ku xayira ama xirma, sida facebook ama xitaa safari lafteeda markay boggaga rarayaan, kuwaas oo ay ka buuxaan xayeysiin ama sawirro.
Taageerada dalabka waa mid aad u xaddidan, Spotify si fiican uma shaqeyneyso, dadka kale waa la soo dejisan karaa laakiin qaab duug ah oo leh waxyaabo badan oo cusub ma ahan, qaar ka mid ah codsiyada xiisaha leh waxay ka socdaan kaliya ios 7 ilaa.
Batarigu waa qodob sidoo kale xigashooyinku u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan, waxay sii socotaa wax maalin dhan leh adeegsi xoog leh oo dhexdhexaad ah,
Marka khibradeyda 9 maalmood ee isticmaalka sida taleefanka gacanta ugu weyn, waxaan dhihi karaa aasaaska waa raaxo, waxba kuma hinaaso iPhone cusub, laakiin haddii aad rabto inaad tuurto wax soo saar badan, codsiyada ayaa ka tagaya wax la doonayo .
Waxaan isku dayi doonaa inaan ku laabto macruufka 8 haddii ay suurta gal tahay, waxaanan rajaynayaa markaan haysto markii aan u cusboonaysiiyo macruufka 9aad, waxaan rajaynayaa in qof ka heli doono fikirkan mid waxtar leh
Ku jawaab Louis
Dadweynaha waxaan su'aal ka qabaa, tallaabooyinka ay ku qoran tahay marka hore waa inaad JeelBil. laakiin markaa waxay dhaheysaa in lagu rakibo openSSH ka Cydia. Hadda soo dejiso nooca 0.5 ee Beehnd oo markaan ka furo dhinaca, Jailbreak, Ku rakib Openssh iyo Ku rakib xulashooyinka Cydia ayaa muuqda. Fursadahaan ayaa aniga ii shaqeynaya? in la sameeyo talaabooyinkaas hore ... maxaa yeelay waligey ma jabin, ama wax. Waxaan haystaa ihpone 4 asalka ah ee warshadda waana bilaash. Mahadsanid
xiriiriyeyaal badan oo dhintay ayaa ka badan sor juana
Waxaan isku dayay inaan hoos u dhigo iphone 4s leh 9.3.5 ilaa nooca 6.3.1 oo leh beedka laakiin ma jirto waddo, markaan furo ayaan qalad ka helayaa isku xirka qaab dhismeedka .net (404) iyo mid kale oo isku mid ah Waxaan ku tijaabiyay daaqadaha 10 pro labadaba 32bits iyo 64bits mana jiraan wax la yiraahdo jeelka waa taleefanka.
wax xal ah oo ku saabsan qaladka .net?
Jawaab Juan Luis G.
Cyte, tweak cusub oo nadiifin doona sharaxaada Cydia